Agehịa aka n'ahụ ịsa ahụ Manufacturers & Suppliers | China ịhịa aka n'ahụ Ngwá Ọrụ Factory
Dog ncha ntutu roomgba ahịhịa
1.This Dog Shampoo Grooming Brush dị mfe ijide ma dabara adaba maka ndị nwe ha na-asa ahụ maka anụ ụlọ ahụ naanị ha.
2.This nkịta ncha ntutu ejiji ahịhịa nwere bristles dị nro, ọ gaghị emerụ ajị anụ na akpụkpọ ahụ ma ị nwere ike iwepu ntutu isi anụ ụlọ gị ngwa ngwa.
3.With a obere gburugburu nchekwa, ị ga-enweghị iru si na ncha ntutu na ncha mgbe ị na-asa gị Pita. Enwere ike iji ahịhịa a saa ahụ na ịhịa aka n'ahụ nkịta.
4.Just na-ete anụ ụlọ gị ntakịrị, nkịta a na-eji ejiji ejiji nwere ike ime ka ụfụfụ bara ụba iji mee ka nkịta ahụ dị ọcha karịa ahịhịa ndị ọzọ.
Dog Bath ịsa ahịhịa
1. Ngwunye ịsa ahụ a na-agba mmiri dị arọ na-ewepu ntutu na ntutu dị nfe na-enweghị ejide tangles ma na-eme ka nkịta gị nwee nkasi obi. Ngwunye roba na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ dị ka magnet maka unyi, uzuzu, na ntutu na-enweghị isi.
2. Nkịta a na-asa ahụ ịsa ahụ nwere ezé mechiri emechi, Ọ naghị ewute anụ nkịta.
3. Nkịta Bath Shower Brush nwere ike iji ịhịa aka n'ahụ anụ ụlọ gị, anụ ụlọ ga-amalite izu ike n'okpuru ngagharị.
4. The otutu na-abụghị ileghara adịgide adịgide n'akụkụ, i nwere ike ike adịgide mgbe ị na ịhịa aka n'ahụ gị nkịta, ọbụna na saa ahụ.
Nkịta Saa ashsa Sprayer
1.Onyinye a na-asa mmiri na-asa mmiri na-agba mmiri na mmiri sprayer.It ọ bụghị naanị nwere ike ịsa ahụ maka anụ ụlọ, kamakwa ịhịa aka n'ahụ.Ọ dị ka inye nkịta gị obere ahụmịhe spa.
2.Professional nkịta saa ịsa sprayer, pụrụ iche contoured udi e mere na-asa nkịta niile nha na ụdị.
3.Two mbughari foset nkwụnye, wụnye na-ewepụ mfe ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí.
Ihe nkịta a na-asa mmiri na-ebelata mmiri na ncha ntutu dị elu ma e jiri ya tụnyere usoro ịsa ahụ ọdịnala.
Pet ntutu isi na-asa ahụ na ahịhịa
1.Pet Hair Grooming Bathing Na Massage Brush nwere ike iji mmiri ma ọ bụ ọkọchị A pụrụ iji ya ọ bụghị naanị dịka ahịhịa ịsa ahụ maka nhicha ntutu anụ, kamakwa dị ka ngwa ịhịa aka n'ahụ maka ebumnuche abụọ.
2.Made nke ihe dị elu nke TPE, dị nro, akwa mgbanwe na nke na-adịghị egbu egbu.With ichebara echiche, dị mfe ijide ma dị mfe iji.
3.Soft ogologo ezé nwere ike ihicha miri ma lekọta anụ ahụ anya, ọ nwere ike iwepụ ntutu na-adịghị ọcha na unyi nwayọ, na-amụba mgbasa ọbara na-ahapụ akwa uwe anụ ụlọ gị dị nro ma na-egbu maramara.
4.Anyị ezé square dị n'elu nwere ike ịhịa aka ma hichaa anụ ụlọ, ihu na ihe ndị ọzọ.